Забур 132 CARS - Nnwom 132 ASCB
1Ao Awurade kae Dawid
ne ɔhaw ahodoɔ a ɔgyinaa ano no.
2Ɔkaa Awurade ntam
na ɔhyɛɛ Yakob Otumfoɔ no bɔ sɛ,
3“Merenhyɛne me fie
4meremma nna mfa me
5kɔsi sɛ menya baabi ama Awurade,
baabi a Yakob Otumfoɔ no bɛtena.”
yɛbɛtoo so wɔ Yaar mfuo so.
7“Momma yɛnkɔ nʼatenaeɛ;
momma yɛnsom wɔ ne nan ntiasoɔ hɔ.
8‘Ao Awurade, sɔre bra wʼahomegyebea,
9Ma tenenee nyɛ sɛ ntadeɛ mma wʼasɔfoɔ;
ma wʼahotefoɔ nto ahurisie dwom.’ ”
10Wo ɔsomfoɔ Dawid enti,
nyi wʼani mfiri deɛ woasra no ngo no so.
nokorɛ ntam a ɔrentwe nsane sɛ,
“Wʼasefoɔ no mu baako
na mede no bɛtena wʼahennwa so.
12Sɛ wo mmammarima di mʼapam so
na wɔtie me nkyerɛkyerɛ a,
ɛnneɛ wɔn mmammarima bɛtena
wʼahennwa so afebɔɔ.”
ɔde hɔ ayɛ nʼatenaeɛ:
ɛha na mɛtena adi ɔhene, ɛfiri sɛ ɛha na mepɛ,
15mede nneɛma pa bebree bɛhyira no
na mama nʼahiafoɔ adidi amee.
16Mede nkwagyeɛ bɛfira nʼasɔfoɔ
na nʼahotefoɔ ato ahurisie dwom daa.
17“Mɛma ɔberempɔn bi apue wɔ Dawid ahennie mu
na mede kanea asi hɔ ama deɛ masra no ngo no.
18Mede aniwuo bɛfira nʼatamfoɔ,
nanso nʼahenkyɛ bɛhyerɛn wɔ ne tiri so.”
ASCB : Nnwom 132